Tovovavy botabota mahay miakanjo
Tetikasa Vakana CEG Project : Hanabe ny adolantsento ny amin’ny lanjan’ny miralenta
Tamin’ity volana febroary ity no natomboky ny avy ao amin’ny Teach For Madagascar ny tetikasa Vakana CEG Project.
Andeha haka tahaka ny fiakanjon’i Violetta
Isan’ny zatovo nanamarika iny taona 2014 iny ilay mpilalao sarimihetsika Martina Stoessel na « Violetta », izay vao 16 taona monja.
Mandeha « boite de nuit »…mamotika fiainana ?
Isan’ny safidian’ny olona ny « boite de nuit » rehefa te hiala voly sy hifaly hiaraka amin'ny namana. Ho an'ny sasany dia fanalana izay heverina ho vesatra na ara-tsaina na ara-batana no anton'ny andehanana « boite de nuit ». Mety ve anefa ny mandeha « boite de nuit » ?
Vehivavy 14 taona ao. Nisaraka tamin’ny sipako aho nefa lasa malahelo be azy, tsy mety adinoko mihitsy izy. Mety ve ny mbola hiverenana amin’ny olon-tiana taloha ? Raha tsy mety, mba toroy hevitra aho hanadinoako azy fa mijaly be.
Maharary foana rehefa ny olona mbola tiana no mandao. Na izany aza anefa, rehefa hita fa tsy mety intsony ny mifamerina, na tsy afaka ny hifamerina intsony, dia ilaina ny manadino.
ZAVOKA AMIN’NY CREVETTES : ho an’ny cholestérol diso miakatra loatra
Fikarakarana : Zaraina roa manaraka ny lavany ny zavoka. Esorina ny voany, tondrahana ranom-boasarimakirana ny nofony mbola ao anaty hodiny, mba tsy hivalomainty. Tsihifina tsara ny patsa be nandrahoina tamin’ny rano. Afangaro amin’ny maiônezy sy ny ketchup. Ahitsy ny sira sy ny dipoavatra raha ilaina. Tsara kokoa ny tsirony raha masiatsiaka. Zaraina amin’ireo antsasaka zavoka ny fangaro patsa be sy maiônezy teo. Haingoina oliva sy persily dia aroso mangatsiatsiaka.
Salade de fruits au yaourt : « Gouter » misoroka ny hatavezan’ny adolantsento
Akora ilaina ho an’olona 4 : - Frezy 200g - Papay 200g - Poara 150g - Tantely 4 sk
Fety ny andro, ataovy mahafatifaty ny tongotra !
Adinontsika indraindray ny mikolokolo ny tongotra. Rehefa manao kapa avo void-tongotra tsara tarehy anefa, miaraka amin'ny akanjo tohitena fohy mahafatifaty, dia mitopy any amin'ny tongotra ihany koa ny mason'ny olona. Amin'izao fety izao ary, dia aza adino ny mikarakara azy io. Na ao an-trano ihany aza dia efa mety ho vita izany.
Manana ireo mampiavaka manokana ny bikany ny tovovavy botabota. Azo aderadera sy omena lanja tsara izy ireny, satria tombony mampiavaka ny dongadonga amin’ireo mahitsihitsy bika.
« Décolleté V », ho an’ireo be tratra
Raha tiana asongadina ny tratra, dia safidio ny “décolleté V”, tsy atao lalina loatra, fa mampiseho kely ny nono fotsiny. Manome lanja ny tratra ihany koa ny “col rond”. Fa ny akanjo mididy “cache-coeur” no tena ideally indrindra.
Lalaovy ny loko
Ireo loko somary matroka no tsara indrindra hanafenana ny hatavezana : mainty, volon-tany... Mba tsy hanamaloka loatra ny fianjaika anefa, dia tsara kokoa raha manao loko somary marevaka, ka izay faritra tsy dia ngeza loatra amin’ny vatana no asiana izany loko marevaka izany.
Eo am-pisafidianana ny akanjo, dia adinoy ireo fohy na lava loatra. Tahaka izany koa ireo miraikitra amin’ny vatana, na malalaka loatra. Aza manao ireny ambonin’akanjo bory tanana, mba tsy hisehoan’ny haben’ny sandry. Torak’izany koa ny pataloha “taille basse” , izay mampiseho kibo.
Ny kalitaon’ny lamba
Misy tokoa ireo lamba vao mainka mampangeza ny vatana. Isan’ny izany ny lamba “velour”, “satin” ary ireo somary matevina. Ny “mousseline”, hasy na landy no tena tsara ho an’ny vatana somary nofosana.
Fomba iray mandaitra izy ity mba tsy handinihan’ny olona loatra ny bika. Asio haingo iray miavaka manamarika ny fianjaika : “noeuds”, “col” miavaka, “sautoir”, pôketra atao somary lehibebe ary kiraro izay tsara kokoa raha avo vodi-tongotra.